Sudaan Kibbaati Fixiinsi Gosootaa Geggeessamaa Jiraachuu Angawoonni Mirga Namaa Tokkummaa Mootummootaa Akeekkachiisan
Muddee 15, 2016
Kutaa Sudaan gama kibbaa hanga tokkoo keessatti fixiinsi gosootaa geggeessamaa jiraachuu isaaf tarii immoo hammaachuu mala jechuu dhaan angawoonni mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisaniiru.
Baatii Adoolessaa keessa erga lolli haaraan ka’ee as hookkarri biyyattii keessaa hammaatee jira. Gurmuun tokkummaa mootummootaa kan Sudan kibbaa siivilotaaf eegumsa gochuuf tarkaanfii hin fudhanne jechuu dhaan miseensonni hawaasa addunyaa qeeqanii jiru.
Akka gurmuun naga-eegumsaa Tokkummaa Mootummootaa – UNMISS jedhamu-- bakkawwan eegumsaa lafa irraa olka’oo ta’anii fi naanooleen meeshaa waraanaa irraa walaba ta’an handaara magaalaa Juubaatti tolfamuu isaanii dubbata.
Dubbi-himaan UNMISS – Shaantaal Persaud garuu, mooraaleen ijaaraman ka POC jedhaman mooraalee dhaabbatoo miti – jedhu. Ammaaf, loltoota Itiyoophiyaa tu konkolaataa Tokkummaa Mootummootaa fi lafoodhaan mooraalee sana to’ataa jira.
Industriin Boba'aa Dhadhabuun Dinagdee Addunyaa Miidha: Angawaa OPEC
Mootummaa Siiriyaati fi waraanii isaan wal hadhu walumatti jiraa nama kuma 50 tahutti tana jidduutti marfamee karaa baqatuun dhabe
Donaald Traamp ka yeroo tokko mormituu isaanii turan Rick Perry Ministara Inerjii akka ta’an filatan